Home News Beentii RW Kheyre halkee bey ku danbeeysay? Maxase dan u ah dhalinta...
Beentii RW Kheyre halkee bey ku danbeeysay? Maxase dan u ah dhalinta Somaliyeed?
Ra’iisal Wasaare Xassan Kheyre oo shacabka Somaliyeed uga barteen been abuur iyo balan qaad aan loo meel dayin aya waxa ay keentay in dhalinta Somaliyeed ku hungobaan rajadii ay ka qabeen Dowalada Somaliya. Mudo ku dhaw labo sano ayuu RW Kheyre waxa uu sheegayay kuna faanayay in u shaqaaleysiiyay in ka badan 2,000 oo dhalinyaro ah taas oo ah been aan sal iyo raad lahaynin.
Dhalinyarada Somaliyeed oo ay ku raagtay shaqo la’aanta iyaga oo waxbartay ayaa waxa ay bilabeen in ay isticmaalan qaab cusub oo ay shaqo ku raadinayaan iyaga oo diyaar u ah in ay ka shaqeeyaan shaqo kastaa oo ay noloshooda ku maareyn karaan.
Mid kamida dhalinta aya u sheegay MOL in dhalinyadii lumisay rajadii ay nolol ku sameeysan lahaayen. Maxmed Cilmi (Maxmed Yare) ayaa yiri “.. bal eeg Xafiiska RW Kheyre waxaa ka shaqeeye oo kaliya dhalinyaro ka soo jeeda beesha uu ka dhashay, waxa uu ka xishoon waayay in uu dhalinta kale ee ka soo jeeda beelaha kale laga shaqalaysiiyo xafiiskiisa, sidee bey macquul ku tahay in ninka noocaaas kaas wax laga sugo”
Previous articleAqriso:-Wasiir C/laahi Goodax Barre oo Xildhibaanada Si aan Asluubeeys-neeyn u Eedeeyay!!!
Next articleCiidanka Xoogga Dalka oo khaarajiyay Maleeshiyaad iyo Horjooge ka tisan Alshabaab.
Xafiiska Madaxweynaha Masar oo Baahiyay War ay Qarisay Warfaafinta Madaxtooyada!!
Amaanka Magaalada Kismaayo Oo Si Aad Ah Loo Adkeeyay